Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » ISpain Iindaba Eziphambili » I-Canary Islands zaseSpain zilungiselela ukuqhuma kwentaba-mlilo
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Resorts • Xanduva • Safety • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Inyikima yenyikima ye-4,222 inyikima ifunyenwe kufutshane neTenegula volcano kwisiqithi saseLa Palma.
Amagosa eCanary Islands akhuphe isilumkiso esimthubi- sesibini kwinkqubo yenqanaba eline.
I-National Geographic Institute yaseSpain ilumkise ukuba kulindeleke iinyikima ezinkulu kwiintsuku ezizayo.
Amagosa karhulumente wengingqi kwiiSpanish Canary Islands akhuphe isilumkiso malunga nokuqhuma kwentaba-mlilo, emva kokuba iZiko laseSpain leSizwe (IGN) libone 'inyikima' yeenyikima ezingama-4,222 XNUMX kufutshane nentaba-mlilo iTeneguía kwisiqithi sase la Palma.
I-volcano yaseTeneguía kwisiqithi saseLa Palma.
The Canary Islands Amagosa akhuphe isilumkiso esityheli ngolwe-Lwesibini- okwesibini kwinkqubo yamanqanaba amane, elumkisa ngenyikima enokubakho.
Namhlanje, uvavanyo luhlaziyiwe ukuze kuchazwe ukuba, ngelixa amagosa engakholelwa kuqhushumbo kwangoko luza kwenzeka, imeko inokutshintsha ngokukhawuleza.
IGN ulumkise ngelithi “iinyikima zomhlaba ezinkulu ngakumbi” zilindelekile “kwiintsuku ezizayo.”
"Asinakho ukwenza uqikelelo lwexesha elifutshane, kodwa yonke into ibonisa ukuba iyakuguquka ibe yinyikima enkulu eza kuba namandla ngakumbi kwaye ive ngabantu," umlawuli IGN kwiiCanary Islands, utshilo uMaría José Blanco.
Ukusukela ngoLwesine, i-11 yezigidi ze-cubic metres (ezingama-388 yezigidi ze-cubic feet) ze-magma ziye "zangeniswa" embindini weCumbre Vieja National Park kufutshane neTeneguía volcano, ngokweCanary Islands Volcanology Institute, ebangela ukuba umhlaba unyuke nge-6cm (2in) kwincopho yayo.
I-volcano yagqitywa okokugqibela ngo-1971, yabangela ukonakala kwepropathi kunye nolwandle olukufuphi, yabulala umlobi omnye, nangona iindawo ezinabantu abaninzi kunye neendawo zabakhenkethi ezingqonge loo ndawo zazingachaphazelekanga. Emva kogqabhuko-dubulo lwangaphambili, imisebenzi yenyikima yehla, yaqala kwakhona ngo-2017, ngeentsuku zamva nje ibona ukonyikima.
Ezinye iindawo ze Canary Islands zikwalikhaya leentaba-mlilo ezisebenzayo, kubandakanya iTenerife's Teide, engakhange iqhume ukusukela ngo-1909, kunye neLanzarote's Timanfaya, eyagqibela ukuvutha ngenkulungwane ye-19.